October 5, 2020 - Online Hartha
“နောက်ကျောတက်၊ ဇက်ကြောတက်၊ လက်ပြင်ငုတ်၊ အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်ကင်းစေတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ”
October 5, 2020 by Online Hartha
နောက်ကျောတက် ဇက်ကြောတက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နောက်ကျောတက် ဇက်ကြောတက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးပါမယ်နော် …. အဆင့် (၁) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နဖူးပေါ်တင် ခေါင်းကို နောက်လှန်နိုင်သလောက် လှန်ဖိထားပါ။ ခါးမပါသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်းချင်း လွှတ်ပါ …။ အဆင့် (၂) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်စေ့မှာကပ်ပြီး ခေါင်းကို ရှေ့ဖိနိုင်သလောက် ဖိပါ။ ခါးကုန်း မသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ …။ အဆင့် (၃) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား … Read more
သပွေီးသား လူတဈယောကျက သငျ့ကို အိမျမကျထဲကနေ ဆကျသှယျဖို့ ကွိုးစားတဲ့ပုံစံ (၇) မြိုး
သေပြီးသား လူတစ်ယောက်က သင့်ကို အိမ်မက်ထဲကနေ ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ပုံစံ (၇)မျိုး ကိုယ့်ဆွေ မျိုးသားချင်းတွေ ထဲက၊ အသိ မိတ်ဆွေတွေ ထဲက တစ်ယောက်ယောက် သေဆုံး သွားပြီးတဲ့အခါ သူတို့ကို သတိရတဲ့ စိတ်ကတော်တော်နဲ့ မလျော့သွား ပါဘူး။ ပြီးတော့ သေဆုံးပြီးတဲ့ သူက အသက်ရှင် ကျန်ရစ်တဲ့ သူတွေကို အိပ်မက်ပေးပြီး ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတတ်ကြတယ် လို့လည်း ယူဆတတ် ပါတယ်။ တစ်ကယ်ရော အဲ့ဒီလို အဖြစ်မျိုး ရှိပါ့မလား ဆိုတာ ကတော့ စဉ်းစားစရာ ပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ဆုံးပါးသွားတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်ကတဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားလာရင် ဒီအချက်လေးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်ပါတယ် (၁) အိပ်မက်ကနိုးလာချိန်မှာတစ်ယောက်ယောက်စိုက်ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ် ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ သူတွေ ဆုံးပါးသွား ခဲ့ပေမယ့် သူတို့တွေကိုယ့် အနားမှာ ရှိနေတုန်းပဲ … Read more
ဇက်ကြောတက်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ
စစ်တမ်းများအရ လူတွေရဲ့၁၀ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဇက်ကြောတက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပြီး ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်က ဘဝမှာတစ်ခါတော့ခံစားဖူးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဇက်ကြောတက်ခြင်းဖြစ်စေသော အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းအလုပ်များခြင်း၊ အိပ်စက်ပုံ ထိုင်ပုံ မမှန်ခြင်း၊ပုံစံတစ်ခုတည်းတွင်အထိုင်များခြင်း၊စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇက်ကြောတက်ခြင်းကိုသက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများကတော့ – (၁)ရေခဲကပ်ခြင်း(လတ်တလောနာကျင်ခြင်းအတွက်) ရေခဲအိတ်ကို ဇက်ကြောပေါ်တွင် ၂၅မိနစ်ခန့်ကပ်ပေးပါ။လောလောလတ်လတ်နာကျင်ခြင်းကိုသက်သာစေတဲ့အပြင် သွေးကြောတွေကိုကျဉ်းစေတဲ့အတွက် အယောင်ကျစေပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရေခဲကို တိုက်ရိုက်မကပ်ပဲ အိတ်တစ်ခုထဲထည့်ပြိးမှ ကပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ (၂)အပူကပ်ပါ (နာတာရှည်နာကျင်ခြင်းအတွက်) ဆန် သို့ ဂျုံကို အိတ်အသေးထဲတွင်ထည့်ပြီးအပူပေးပါ။ရေနွေးအိတ်ကိုလဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ထိုအိတ်ကိုဇက်ပေါ်သို့ ၁၅မိနစ်ကပ်ပေးပါ။ မနက်အိပ်ရာထနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်ခင်ကပ်ပေးပါက ပိုထိရောက်ပါတယ်။ရေနွေးနဲ့ရေချိူးခြင်းကိုလဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေချိူးတဲ့အခါ ဆားခါးထည့်ချိူးပါ။ဆားခါးတွင်ပါသော မက်နီဆီယမ်က ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပါတယ်။ (၃)ဗီတာမင် ဘီ၁၂ပါသောအစာများစားပါ သင့်အာရုံကြောတွေကို ကာကွယ်ထားသော အလွှာကိုအားကောင်းစေပြီး နာကျင်ခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ် (၄)နနွင်းစားပါ ဟင်းထဲ နနွင်းထည့်ချက်ခြင်း၊ ရေနွေးထဲနနွင်းနဲ့ပျားရည်ခပ်သောက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (၅)လည်ပင်းလေ့ကျင့်ခန်း ဇက်ကြောနာကျင်ခြင်းကိုသက်သာစေတဲ့အပြင် … Read more
ညအိပျရငျ ဘယျဘကျစောငျးပွီး အိပျဖွဈအောငျ အိပျပါ…
သင်ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘက်ကို စောင်းအိပ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီဘာကြောင့် ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သင်ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ သင်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကိုအရေးတကြီး ပတ်သက်နေလို့ပါပဲ။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်လေ့မရှိရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ရင်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်သို့စောင်းအိပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြားသောအရာဝထ္တုတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဖယ်ရှားသွားအောင် ကူညီပေးနိုင်လို့ပါပဲ ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေသာမက ဦးနှောက်ထဲက ဓာတုအညစ်အကြေးတွေကိုလည်း ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။သင့်ဆီမှာ နှလုံးပြဿနာရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ရင်ပူခြင်းဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ညာဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက ဒီဝေဒနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပြီး ဘယ်ဘက်ကို ဆယ်မိနစ်ခန့်လောက် စောင်းအိပ်လိုက်ရုံနဲ့တင် … Read more
ခြေထောက်တွေက သတိပေးနေသော အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ လက္ခဏာရပ်များ…
ခြေထောက်တွေကသတိပေးနေသော အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လက္ခဏာရပ်များ ကျွန်မတို့ရဲ့ ခြေထောက်တစ်စုံဟာ ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အလေးချိန် ကို သယ်ပိုးထားရတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်တစ်စုံမှာ ခန္ဓာကိုယ်က အရိုးစုစုပေါင်းရဲ့ ၂၅%ပါဝင်နေပြီး အဆစ်ပေါင်း ၃၃ခု၊ အရွတ်ပေါင်း ၁ဝဝ၊ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ သွေးကြောမျှင်လေးတွေနဲ့ ကြွက်သားတွေပါဝင်ပါတယ်။ ခြေထောက်မှာပါဝင်တဲ့ သွေးကြောမျှင်လေးတွေဟာ နှလုံး၊ ကျောရိုးမ၊ ဦးနှောက်စတဲ့ အရေးကြီး အင်္ဂါတွေနဲ့ ဆက်နွှယ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခြေထောက်တွေရဲ့ မူမ မှန်တဲ့ အခြေအနေတွေကနေတဆင့် ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှုတွေကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁။ ခြေထောက်အကြောဆွဲခြင်းနှင့် ကြွက်တက်ခြင်း။ လမ်းလျှောက်နေရင်း ခြေထောက်အကြောဆွဲခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်းဖြစ်ပါက သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်မှာ ပြဿနာဖြစ်နေ တယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး အကြောမလျှော့ခြင်းနှင့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ခြေထောက် အကြောဆွဲခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၂။ … Read more
ခြင်မလာဘူး ပြောလို့စမ်းကြည့်တာ တကယ်ဟုတ်နေတယ် သိတာတောင်နောက်ကျနေတာ…
ခြင်မလာအောင်လို့ ပြောလို့စမ်းတာ တကယ်ဟုတ်နေတယ် သိတာတောင်နောက်ကျနေတာ စပါးလင်ကို ဒီလိုလေးထားလိုက်တာ ခြင်တစ်ကောင်မှ မရှိတော့ပါ သိတာတောင်နောက်ကျနေတာ မီကာဇာ (မာကျူရီ)ဟိုတယ် ရေကူးကန်ဘေးမှာ စိုက်ထားတာတွေ့လို့မေးကြည့်တာခြင်မလာအောင်လို့ပြောလို့စမ်းတာ တကယ်ဟုတ်နေတယ် ကျွန်တော်ဆေးဆရာ တယောက် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ..အားလုံးကို ကျန်းမာစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တွေ့သမျှဆေးနည်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ -တစ်ခြား ခြင်မကိုက်စေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်းနည်းလမ်းများ နွေရာသီရောက်လာနဲ့အမျှ ညနေခင်းတွေဆို အပြင်မှာ လေညှင်းလေး ထွက်ခံရင်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူချင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခြင်ကိုက်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရကြပါတယ် ခြင်ကိုက်တဲ့အခါ ယားယံတာ၊ ယောင်ရမ်းတာတွေအပြင် များစွာသောရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ခြင်မကိုက်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ကြက်သွန်ဖြူစားပါ ကြက်သွန်ဖြူအနံ့ကို ခြင်တွေအပြင် တခြားအင်းဆက်ပိုးမွှားတွေက မခံနိုင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် ကြက်သွန်ဖြူစားပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ခံတွင်းမှာ … Read more
“အိမျ၊ ကြောငျးဆောကျရာတှငျ မထားအပျသော အပငျ၊ မသုံးအပျသော သဈ နှငျ့ ရကျ/လ ရှေးနညျး”
“အိမ်၊ ကျောင်းဆောက်ရာတွင် မထားအပ်သော အပင်၊ မသုံးအပ်သော သစ် နှင့် ရက်/လ ရွေးနည်း” အိမ်၊ ကျောင်း ဆောက်ရာ ရက်လရွေးနည်းများ (ခေတ်ပြောင်းအခြေအနေအရ တချို့အရာများ မဖြစ်နိုင်သော်ငြား ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့စကားလိုပေါ့ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်လာကို လိုက်နာထိမ်းသိမ်းတဲ့သဘောပါ) သစ်ပင်ပန်းမန်ဆိုတာ လူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အရာပါ။ သဘာဝရာသီဥတုကို သင့်တင့်မျှတစေသလို သတ္တဝါတွေကိုလည်း အကျိုးပြုစေပါတယ်။ မိမိအိမ်ပတ်ဝန်းကျင် ခြံထဲ၊အိမ်မှာ အပင်တွေ စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ရွှင်လန်းစေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ ရှေးမြန်မာအယူအရ မိမိအိမ်၊ ခြံထဲမှာ မစိုက်အပ်၊ မရှိသင့်တဲ့ အပင်တချို့ ရှိပါတယ်။ သိပ္ပံခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီအယူတွေ ခေတ်မမီတော့ ဘူးလို့ဘဲဆိုဆို၊ရှေးထုံးကိုလည်းမပယ်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားဘဲပြောပြော ဗဟုသုတအဖြစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သိရအောင် အိမ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ ရှေးမြန်မာ … Read more
ကလေးငယ်တွေ ကြို့ထိုးရခြင်း အကြောင်းရင်း (၇) ချက်…
ကြို့ထိုးတယ်ဆိုတာ ကလေး၊ လူကြီးအားလုံးမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ။ မိခင်ဝမ်းထဲမှာ ရှိနေစဉ်ကတည်းက ဗိုက်ထဲက ရေမွှာရည်တွေကို မျိုချမိတဲ့အတွက် ကြို့ထိုးတာ ဖြစ်နိုင်သလို မွေးကင်းစ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာလည်း မိခင်နို့ ဒါမှမဟုတ် အခြားတစ်ခုကြောင့် ကြို့ထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးတွေမှာ ကြို့ထိုးခြင်းဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ပျောက်ကင်းအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အစာအိမ် အချဉ်ပေါက်ခြင်း အစာအိမ် အချဉ်ပေါက်တယ်ဆိုတာက အစာအိမ်ထဲက အစာတွေ အစာပြွန်ထဲ ပြန်ရောက် သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အစာအိမ် အဝနားမှာရှိပြီး အစာတွေ အပေါ်ပြန်မတက်အောင် တားဆီးပေးတဲ့ အောက်ခြေ အစာပြွန်က ကောင်းစွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးတာကြောင့် ကြို့ထိုးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစာနဲ့ အချဉ်ရည်တွေ အပေါ်ပြန်တဲ့အခါ ဖြစ်တဲ့ ကျိန်းစပ်မှုက ရင်ဝမ်းခြား ကြွက်သားကို တလှပ်လှပ်ဖြစ်စေတာကြောင့် … Read more
မီးပကျြနေ တဲ့ မင်ျဂလာဦး ည နလေ့ယျခငျးထိ အိပျရာထဲ က ထှကျမလာနိုငျ တဲ့ ကွငျစဦး လငျမယား ရဲ့ အဖွဈ…
မီးပျက်နေ တဲ့ မင်္ဂလာဦး ည နေ့လယ်ခင်းထိ အိပ်ရာထဲ က ထွက်မလာနိုင် တဲ့ ကြင်စဦးလင်မယား ရဲ့ အဖြစ် ကိုမောင်ကောင်းနဲ့မျေခာဘုံတို့ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး အကြင်လင်မယားဘဝေရာက်ကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်မိဘကလဲ ပြည့်စုံလှတာမဟုတ်တော့ မင်္ဂလာစရိတ်လေးရဖို့တောင် နှစ်အတ်ာတော်ကြာ စုခဲ့ရတာလေ။ ဒီတော့သူများတွေလို ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွေ၊ ဘာတွေလည်း မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုမောင်ကောင်းမိဘအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဦးညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုမောင်ကောင်းရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ မောင်ရွှေအေးဟာ ကျောင်းသွားခါနီး အမေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မနက်စာကို စားနေရင်း… “အမေ…။ အကိုနဲ့အမ ထကြပြီလား…” “မထကြသေးဘူး…” “ကျနော်တွေးမိတာကတော့…” “ကိုယ့်ဖာသာ စားမှာကိုမြန်မြန်စားစမ်းပါဟာ…။ တော်ကြာကျောင်းနောက်ကျနေအုန်းမယ်…” ဒီလိုနဲ့ မောင်ရွှေအေးလဲ မနက်စာစားပြီး ကျောင်းထွက်သွားပါတယ်…။ မုန့်စားကျောင်းဆင်းတော့ ကျောင်းနဲ့အိမ်က နီးနေတဲ့အတွက် မောင်ရွှေအေးက အိမ်ပြန်လာပြီး ထမင်းစားလေ့ ရှိပါတယ်…။ ထမင်းစားနေရင်း ခူးခပ်ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ … Read more
အကပျြအတညျး မြားလာပွီး စီးပှားလာဘျလာဘ လိုအပျလာခဲ့ရငျ ..
အကျပ်အတည်းများလာပြီး စီးပွားလာဘ်လာဘ လိုအပ်လာရင် .. ပွဲတွေ့ယတြာမီးထွန်းနည်း(ဂါထာမီးထွန်းနည်း) ဒီလို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ သေသေချာချာ အစွမ်းရှိ စီရင်နည်းတွေကို တင်ပေးဖို့ တာဆူခဲ့တာကြာပါပြီ။ တင်မယ့်တင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပေးချင်တာကြောင့် အချိန်တစ်ခုထိ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။ ဒါက အင်းကွက် စမကွက်မဟုတ်ပါဖူး။ဒါကြောင့် ရေးသားစဉ် တင်းကြပ်တဲ့ စည်းစနစ်တွေ မလိုအပ်ပဲ လူတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူ စီရင်အကျိုးပြီးနိုင်ပါတယ်။ အဓိက အနေနဲ့ကတော့ …. (၁)အကြတ်အတည်းများတဲ့အခါ (၂)ဂြိုလ်အစီးအနင်းညံတဲ့အခါ (၃)စီးပွားလာဘ်လာဘ လိုအပ်တဲ့အခါ (၄)အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယတြာခြေတိုင်း အစွမ်းမထက်ဖြစ်တဲ့ခါ …..စတဲ့ အခြေအနေ (၄)မျိုးအတွက်ရည်ရွယ် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ စီရင်နည်း သန့်ပြန့်တဲ့ စက္ကူအပေါ်မှာ ပုံပါအတိုင်း ရေးသားရမှာပါ။ရေးတဲ့အခါ မနက်ပိုင်း ဘုရားရှေ့မှာ ရေးသားရပါမယ်။ ရေးနေစဉ် စကားမပြောမိဖို့နဲ့ ခေါ်ရင်မထူးဖို့နဲ့ ရေးသားမူကိုပဲ အာရုံစိုက်နေပါမယ်။ ပုံပါအတိုင်း အလယ်မှာ … Read more